दोलखा समन्वय समितिको निर्वाचन आज: गठबन्धन सुविधाजनक बहुमतमा ! - Kantipath
दोलखा समन्वय समितिको निर्वाचन आज: गठबन्धन सुविधाजनक बहुमतमा !
बुधबार असार १, २०७९
जिल्ला समन्वय समिति दोलखाको निर्वाचन आज (असार १ गते) हुने भएको छ । दोलखाको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेसँगै निर्वाचन हुन लागेको हो ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जेठ २४ गते नामावली प्रकाशन गर्ने, २६ गते नामावली सच्याउन संशोधन गर्ने, २७ गते मतदाताको नामावलीमा उजुरी दिने तथा अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने, २८ गते मनोनयन दर्ता, २९ गते उम्मेदावारकोविरुद्ध दाबी विरोध गर्ने र ३० गते उम्मेवारलाई चिह्न प्रदान गरी असार १ गते निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो ।
समन्वय समितिमा कुनै पनि पार्टीको एकल बहुमत भने रहेको छैन । सात गाउँपालिका र दुई नगरपालिका गरी नौ स्थानीय तहका १८ प्रमुख उपप्रमुखमध्ये कुनैपनि राजनीतिक दलको एकल बहुमत छैन । एकल बहुमत नभएपछि राजनीतिक दलका बीचमा गठबन्धन गरी समन्वय समितिको निर्वाचन हुने भएको छ । माओवादी, कांग्रेस र समाजवादी गठबन्धनमा छन् भने एमाले एकल प्रतिष्पर्धामा छ ।
जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) दोलखाको निर्वाचनका लागि प्रमुख सहितको पदमा १९ जनाले मनोनयन दर्ता गराएका छन् । जिससको प्रमुखमा २, उपप्रमुखमा ३, सदस्यमा ६, दलित वा अल्पसंख्यकमा २ तथा महिला सदस्यमा ६ जनाको उम्मेदवारी परेको हो । जिससको प्रमुखमा सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका बर्जुराम घतानी (कृष्ण) र एमालेको तर्फबाट जिसस प्रमुखमा ऋषिकेश उप्रेतिले मनोनयन दर्ता गराएका छन् । यस्तै जिससको उपप्रमुखमा गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा एकिकृत समाजवादीका दोर्जी शेर्पा, नेकपा एमालेको तर्फबाट गोमा केसी र स्वतन्त्र तर्फबाट नानीकाजी तमाङले उम्मेदवारी दिएका छन् ।
समितिको सदस्यमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट अनिल कुमार तमाङ ,कृष्ण बहादुर श्रेष्ठ, टसि शेर्पाले उम्मेदवारी दिएका छन् भने नेकपा एमालेको तर्फबाट झम्के बहादुर श्रेष्ठ, नरबहादुर कार्की र नवराज काकीको उम्मेदवारी परेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ ।
यसैगरी दलित वा अल्पसंख्यकमा गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका सन्फुन्जी शेर्पा र एमालेको तर्फबाट कमल लकांद्रिको उम्मेदवारी परेको छ । जिससको महिला सदस्यमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट कल्पना थामी, चन्द्रकला ठकुरी र मेनुका चौंलागाईको उम्मेदवारी परेको छ भने नेकपा एमालेको तर्फबाट एकमाया भुजेल, कविता मुग्राती र देवि बसेलको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ ।
जिससको निर्वाचनमा जिल्लाका ९ वटा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख गरी १८ जना मतदाताले मतदान गर्नेछन् । जिल्लामा नेकपा एमालेको ७, नेपाली कांग्रेसको ६, नेकपा माओवादी केन्द्रको ४ र नेकपा एसका एक जना मतदाता रहेका छन् । गठबन्धनसंग ११ भोट छ जुन सुविधाजनक बहुमत हो ।